Ny Belmont Report nandresy lahatra fa ny fitsipiky ny fanajana ny olona roa miavaka tsara dia ahitana ny faritra: (1) ny olona dia tokony ho raisina ho toy mizaka tena sy ny (2) olona malain fizakantena amin'ny tokony ho mitondra ny lohateny hoe ho fanampiny fiarovana. Fizakantena mitovitovy mifanitsy ny mamela ny olona hifehy ny tenany ihany izy. Amin'ny teny hafa, fanajana ny olona manolo-kevitra fa ny mpikaroka tsy hanao zavatra tokony ho olona tsy misy ny firaisan-kina. Manakiana, mihazona izany na dia ny mpikaroka mihevitra fa ny zavatra mitranga tsy mampaninona na mahasoa. Ny fanajana ny olona mitarika ho amin'ny fiheverana fa tsy mpandray anjara-mpikaroka-mahazo ny manapa-kevitra.
Amin'ny fomba fanao, ny fitsipiky ny fanajana ny olona efa adika ny mpikaroka midika hoe tokony, raha azo atao, mandray fahalalana ampy fanekena avy amin'ny mpandray anjara. Ny hevitra fototra amin'ny fahalalana ampy fanekena ny mpandray anjara dia tokony aseho amin'ny fanazavana mitombina amin'ny endrika takatry ary avy eo dia tokony manaiky an-tsitrapo handray anjara. Tsirairay ireo teny ireo no tena nisy ny momba ny Mitana fanampiny adihevitra sy ny vatsim-pianarana (Manson and O'Neill 2007) , ary hanokana aho tatỳ aoriana fizarana iray manontolo ao amin'ity toko ity hanapa-kevitra.
Raha mampihatra ny fitsipiky ny fanajana ny olona ho telo ohatra hatrany am-piandohana ny zava-nisongadina ny toko faritra ny fiahiana amin'ny isan-olona izany. Amin'ny tranga tsirairay, ny mpikaroka nanao izay zavatra ho mpandray anjara-nampiasaina ny tahirin-kevitra (Andramo, Ties, na Time), nampiasa ny solosaina mba hanatanteraka ny asa fandrefesana (encore), na voasoratra anarana ireo ao amin'ny fanandramana (-pihetseham-po areti-mifindra) -without ny fankatoavana na ny fanentanana . Ny fandikana ny fitsipiky ny fanajana ny olona tsy mandeha ho azy hanao fianarana ireo impermissible-pahamendrehana; Ny fanajana ny olona dia iray amin'ireo fitsipika efatra. Nefa, mieritreritra momba ny fanajana ny olona no soso-kevitra ny sasany fa ny fianarana fomba azo Nihatsara-pahamendrehana. Ohatra, mpikaroka afaka nahazo ny sasany avy endriky ny faneken'ny mpandray anjara eo anoloan'ny nanomboka fianarana na taorian'ny nifarana; Aho hiverina ho any amin'ireo safidy rehefa miresaka fahalalana ampy fanekena amin'ny an-tsipiriany eto ambany. Farany, fikarohana ethicists manamafy fa ny olana momba ny olona nandika ny fizakantena hitsangana na dia amin'ny raharaha tanteraka fampianarana mahasoa. Olana momba ny hanimba sy ny loza voajanahary miditra etika fiheverana, fa izy ireo dia miresaka amin'ny ankapobeny eo ambany ny fitsipiky ny Beneficence, ny foto-kevitra izay no hanaovako lahateny manaraka.